थाइरोइड परिचय र गलगांड
Dr Badri Paudel
स्वास्थ सम्बन्धि जानकारी
मधुमेह सम्बन्धी जानकारी र प्रकार
मधुमेहका लक्षण र असर
मधुमेह रोगीले के खान हुन्छ
उच्च रक्तचाप सम्बन्धी जानकारी
उच्च रक्तचाप परिचय र प्रकार
लक्षणहरू र गलत धारणाहरु
मृगौला रोग सम्बन्धी जानकारी
मृगौला रोगको लक्षण
फिस्टुला बनाएपछी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
मृगौला बायोप्सीको लागि ध्यान दिनुपर्ने जानकारी
मोटोपना सम्बन्धी जानकारी
Hypothyroidism ( हाइपोथाइरोडिजम् )
Hyperthyroidism ( हाईपरथाईरोइडिजम् )
मुटु सम्बन्धि जानकारी
कोलेस्टेरोल र हृदयघात
दम( ब्रोन्कियल आज्मा)
"Act or accept."- Unanonymous
के हो थाइरोइड?
थाइरोइड हार्मोन (वृद्धि हार्मोन) यो हार्मोन शिशु बढ्नका लागि आवश्यक हार्मोन हो । यो शरीरमा ऊर्जाशक्तिको क्रियाकलाप (मेटाबोलिज्म) बढाउने हार्मोन हो । शिशुदेखि वृद्धासम्मलाई यो हार्मोन जरुरी हुन्छ । शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिका लागि यो हार्मोनले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । विदेशमा शिशु जन्मनासाथ थाइरोइड चेकअप गरिन्छ । शिशुलाई थाइरोइडका कारण सुस्तमनस्थिति हुनसक्छ । यसलाई पहिले नै पहिचान गरी औषधि दिएर सुस्तमनस्थितिबाट बचाउन सकिन्छ । नेपालमा भने यस्तो अवस्थाको विकास भैसकेको छैन । पुरुषको तुलनामा धेरै महिलालाई थाइरोइडको समस्या देखापर्छ । थाइरोइडको समस्या नेपालीमा बढी देखिएको छ । यस विषयमा धेरै भ्रम पनि पाइन्छ। थाइरोइड भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन । समयमै औषधि गरे यो रोग निको हुन्छ ।
कुनै विशेष समाजमा मुख्यमा रुपमा पाइने यो रोगमा थाइरोइड नाम गरेको ग्रन्थी बढ्ने र त्यसको कार्य पनि वृद्धि हुने हुन्छ जसको कारण घांटी सुन्निएझैं देखिन्छ। सामान्य गलगांडलाई अविषाक्त गलगांड (non toxic goiter) पनि भन्ने चलन छ, यो कुनै क्यान्सरजन्य प्रकृया अन्तर्गत भएको हुंदैन, भने सुरुवाती अवस्थामा यसले माइक्सोडेमा र थाइरोटक्सिकोसिससंग पनि कुनै सम्बन्ध राख्दैन। यो ग्रन्थी बढ्नुको कारण स्पष्टरुपले थाहा नभएता पनि धेरैजसो अवस्थामा थाइरोइड हर्मोन बन्ने प्रकृयामा हुने गडबडी प्रमुख कारकको रुपमा देखिएको छ। जस्तो कि:
खानामा आयोडिनको कमी हुनु,
खानामा गलगांडलाई बढावा दिने खानेकुराको प्रचुरता हुनुस् बन्दा वा सलगम जसमा थाइरोइड हर्मोन विरुद्धका तत्वहरु रहेका हुन्छन् जसले थाइरोइड ग्रन्थीमा पुग्नुपर्ने आयोडिनको मात्रामा कमी ल्याउंदछ,
क्याल्सियमको प्रचुरता भएको खाना वा पानीको सेवनस् क्याल्सियमले आयोडिनलाई थाइरोइड ग्रन्थीमा जम्मा हुन अवरोध गर्दछ।
लिथियम, सल्फोनामाइडस् लगायतका एन्टिथाइरोइड औषधीको साइड इफेक्ट
किशोरावस्थामा, गर्भावस्थामा तथा महिनावारी रोकिने समय तिर देखिन्छ: यस्तो अवस्थामा थाइरोइड ग्रन्थीले अत्यधिक काम गर्नु पर्ने हुन्छ र गलगांड देखिन सक्छ।
पुरुषमा भन्दा महिलामा यो ब्यापक मात्रामा पाइन्छ। अझ किशोरीहरुमा यसले व्यापकता पाएको देखिन्छ। १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा यो यथेष्ट मात्रामा पाइन्छ।
कतिपय अवस्थामा यो लक्षण विहिन रुपमा देखा परेता पनि अन्य अवस्थामा भने यसको कारण ग्रन्थी वरिपरि रहेका अंगहरु थिचिएको कारण विभिन्न लक्षण देखा पर्न सक्दछन्।
खान अप्ठेरो हुने,
घांटी तथा टाउकोमा रहेका रक्तनलीहरु फुल्ने,
सास फेर्न गाह्रो
कुनै कारणवस् रक्तश्राव भएको खन्डमा भने उक्त गांठो एकदम पिडादायक हुनुका साथै माथि उल्लेखित लक्षणहरु तीव्र रुपमा देख्न सकिन्छ। अन्यथा सुन्निएको उक्त ग्रन्थी नरम, दुवैतिर बराबर हुन्छ तर धेरै समय देखि रहेको खन्डमा चाहीं सानो सानो नोड्युल तथा सिस्टहरु महसुस हुन सक्दछ।
समयमै उपचार नगरिएको खन्डमा यो आफैंले सौन्दर्यतामा कमी ल्याउने र मानसिक तनावको सृजना गर्ने बाहेक केही पनि समस्या नल्याउने भएता पनि यो सुन्निएको कारण वरिपरि रहेका अंगहरुमा पार्ने असरको कारण विभिन्न समस्याहरु भने देखिन सक्छ।
विस्तृत क्लिनिकल हिस्ट्री यसको निम्ति सहायक हुन सक्दछ, तर घांटी वरिपरि सुन्निएको अवस्था र यसो हुनको निम्ति कारक रहने अन्य अवस्थालाई नकारीसकेपछि यो अवस्थाको निदान गरिन्छ। टी ३ र टी ४ नाम गरेका हर्मोनको मात्रा भने सामान्य हुन्छ, त्यसैगरी रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि सामान्य नै हुन्छ। एक्स रे ले स्वासनली बांगिएको देखाउन सक्छ तर स्पष्ट जानकारी भने सिटी स्क्यानबाट हांसिल हुन सक्छ। त्यसैगरी फाइन निडल एस्पिरेसन साइटोलोजी (FNAC) पनि सहायक सिद्ध हुन सक्छ।
आयोडिनको कमीको कारण भएको अवस्थामा खानामा पर्याप्त आयोडिनको मात्रा समावेस गर्ने उपाय निकै लाभदायक हुन्छ यसले रोग नियन्त्रण तथा वचावटमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ग्रन्थी बढेको सानो छ केहि गर्नु पर्दैन तर यदि ठूलो छ र यसले वरिपरिका अंगहरुलाई थिचेको कारण देखिने लक्षणहरु ठूला भएको खन्डमा भने शल्यक्रिया (पार्सिएल थाइरोडेक्टोमी) गर्न सकिन्छ।
तपाईं अहिले यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ स्वास्थ सम्बन्धि जानकारी थाइरोइड थाइरोइड परिचय र गलगांड